၂၀၂၀ NAB ရုပ်မြင်သံကြားဥက္ကChairman္ဌ၏ဆုသည်သရုပ်ဆောင်တယ်ရီ Crews အားရရှိခဲ့သည် - NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ၂၀၂၀ NAB ရုပ်မြင်သံကြားဥက္ကChairman္ဌ၏ဆုသည်သရုပ်ဆောင်တယ်ရီ Crews ကိုရရှိခဲ့သည်
သရုပ်ဆောင်၊ လူရွှင်တော်၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့်အနုပညာရှင်တယ်ရီ Crews
မည်သည့်ရုပ်ရှင်၊ ရုပ်မြင်သံကြားအမျိုးအစားများတွင်ပါ ၀ င်သည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့၏သရုပ်ဆောင်နည်းသို့မည်သည့်ချဉ်းကပ်ပုံကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေသူတို့၏အနုပညာလက်ရာများတွင်သရုပ်ဆောင်တိုင်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏အထူးအရည်အသွေးနှင့်၎င်းတို့တည်ဆောက်ထားသောထူးခြားသောအမွေအနှစ်များရှိသည်။ ။ တယ်ရီအမှုထမ်း ထိုကဲ့သို့သောသူဖြစ်၏, နှင့်သာယာဝပြောတဲ့သရုပ်ဆောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေဆဲအဘယျသို့အတွက်, သူနောက်ဆုံးတော့သူကထိုက်သောအသိအမှတ်ပြုမှုကိုလက်ခံရရှိသည်။ ဤသည်2020ပြီလ XNUMX, အ လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး (NAB) ကတင်ပြပါလိမ့်မယ် ရုပ်မြင်သံကြားဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဆုချီးမြှင့် တယ်ရီလေယာဉ်အမှုထမ်းရန်
သင်္ဘောသားများသည်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်သည် အား NBC'' s ကို ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုကို- အနိုင်ရတဲ့ဟာသရုပ်မြင်သံကြားရဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်း“ဘရွတ်ကလင်းကိုးကိုးလေယာဉ်အမှုထမ်းများသည်အမေရိကန်စွမ်းရည်ပြပြိုင်ပွဲ၏အိမ်ရှင်အဖြစ်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။အမေရိကားရဲ့ Got Talent:။ ” NAB တီဗီဥက္ကChairman္ဌ၏ဆုသည်ရုပ်မြင်သံကြား၌အနုပညာစည်းကမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောသူတို့၏အောင်မြင်မှုအတွက်လူတစ် ဦး ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ၂၀၂၀၊ Aprilပြီ ၂၁ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင်တယ်ရီ Crews သည် NAB TV ဥက္ကChairman္ဌ၏ဆုကိုရလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံလွှင့်သူများ၏အခမ်းအနားဖြစ်သည် မှာ 2020 NAB ပြရန် Las Vegas မှ, နီဗားဒါး၌တည်၏။
ကာတွန်း၊ လူရွှင်တော်၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့်အနုပညာရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့် Crews သည်သူမအတွက်ရယ်စရာကောင်းသောဘောလုံးသမားကိုလူသိများသောကြော်ငြာများတွင်လူသိများသည်။ စတေးခံသူများ franchise အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သော sitcoms ၌သူ၏အောင်မြင်မှုများရုပ်မြင်သံကြားဖျော်ဖြေပွဲသည် လူတိုင်းခရစ်ကိုမုန်းတယ်အမျိုးမျိုးသောပြိုင်ဆိုင်မှုပြပွဲ hosting နှင့်အတူပါဝင်သည်ကြောင်း အဘယ်သူသည်သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လို, အမေရိကားရဲ့ Got Talent:နှင့် ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးသောကျရှုံးမှုများ.
နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်အဖြစ် Crew ၏သက်ရောက်မှုကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြသည့်အခါ NAB ရုပ်မြင်သံကြားဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChair္ဌ အမ်မလီ Barr သူပြောတာက Terry Crews ၏ပရိသတ်များကိုဖျော်ဖြေနိုင်သည့်ထူးခြားသောစွမ်းရည်သည်ရိုးရာရုပ်မြင်သံကြားထက်ကျော်လွန်ပြီးအမျိုးအစားများနှင့်နတ်ဝင်သည်များကိုဖြတ်ကျော်သည်။ ” သူသည်လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ခိုင်မာသည့်ထောက်ခံသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးမည်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ သူကိုတင်ပြရန်နှိမ့်ချစွာပြောကြားခဲ့သည်။ အသရေရှိသောသူဖြစ်၏။ ”
Terry Crews ၏ရုပ်ရှင်ခရက်ဒစ်အများအပြားတွင်အောက်ပါကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များပါဝင်သည်။
ဒီရုပ်ရှင်တွေနဲ့အတူတယ်ရီရဲ့လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ highly တော်တော်များများကမျှော်လင့်ထားသည့်ကာတွန်းကားတွေလိုပါ ၀ င်လာမှာပါ။ အဆိုပါ Willoughby ရဲ့ နှင့် မြည်.
2017 ခုနှစ်တွင်လေယာဉ်အမှုထမ်းများထဲမှအမည်ရှိခဲ့သည် time မဂ္ဂဇင်း's ၏တစ် ဦး အဖြစ်တစ်နှစ်တာ၏ပုဂ္ဂိုလ်များတိတ်ဆိတ် Breakerလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးမှုကိုဆန့်ကျင်သူ၊ #metoo လှုပ်ရှားမှု။ သင်္ဘောသားများနှင့်လည်းပူးပေါင်း Polaris စီမံကိန်းလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်မျက်မှောက်ခေတ်ကျွန်စနစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရေးတွင်ထိပ်တန်းအကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းနှင့်အတူသူ၏ကြိုးပမ်းမှုများကသူ့ကိုဝင်ငွေကူညီပေးခဲ့သည် UN Global Generation Award.
အဆိုပါ NAB ရုပ်မြင်သံကြားဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဆုချီးမြှင့် ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လေးကြိမ် Emmy နှင့်နှစ်ကြိမ်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုရမင်းသားနှင့်အတူ 2009 ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးပွဲထွက်ခဲ့သည် Kelsey Grammar လက်ခံသူအဖြစ်။ အတိတ်လက်ခံသူများပါဝင်သည် ဒါကကျွန်တော်တို့ပါပဲ နှင့် Black က Panther ကြယ် Sterling K. ဘရောင်း, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Kristen Bell ကိုနှင့်ဆုရမင်းသမီးနှင့်ထုတ်လုပ်သူ အမရေိ Ferreraအခြားသူများအကြား။ 2020 အတွက်စာနယ်ဇင်းအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန် NAB ပြရန်ထို့နောက် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
အဆိုပါ လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး အမေရိကရှိရုပ်သံလွှင့်သူများအတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအသင်း၏အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ NAB သည်ဥပဒေပြုရေး၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာကိစ္စများတွင်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထုတ်လွှင့်သူများသည်၎င်းတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားကောင်းလာစေခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုအသုံးချခြင်းအားဖြင့် NAB ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ NAB အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ www.nab.org.
အဆိုပါ 2020 အကြောင်း NAB ပြရန်
အဆိုပါ 2020 NAB ပြရန် မီဒီယာ၊ ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာများပါ ၀ င်သည့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစည်းဝေးကြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၂၀၂၀၊ 18ပြီ ၁၈ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ Las Vegas တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀ ကျော်မှတက်ရောက်သူ ၉၀,၀၀၀ ကျော်နှင့်ပြသထားသောသူ ၁၆၀၀ ကျော်ရှိသည်။ 22 NAB ပြရန် ဒီဂျစ်တယ်ဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်း၏စီးပွားရေးကိုပိုမိုအားဖြည့်ပေးသည့်ရိုးရာအသံလွှင့်ခြင်းကိုကျော်လွန်သောဖြေရှင်းချက်များအတွက်အန္တိမစျေးကွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖန်တီးမှုနယ်ပယ်မှသည်စားသုံးမှုအထိပလက်ဖောင်းများစွာသို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ 2020 NAB ပြရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြော်အမြင်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ဘဝမှအကြောင်းအရာများကိုရောက်စေဖို့ကျင်းပရမည်ဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
2020 နှင့်ပတ်သက်။ အပြည့်အဝအသေးစိတ်သည် NAB ပြပွဲထို့နောက်ထုတ်စစ်ဆေး www.nabshow.com.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ အမေရိကားရဲ့ Got Talent: ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ဘရွတ်ကလင်းကိုးကိုး ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုကို NAB NAB 2015 NAB 2016 NAB 2020 NAB ပြရန် NAB TV ဥက္ကChairman္ဌ၏ဆု NAB16 nabshow တယ်ရီအမှုထမ်း ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံလွှင့်သူများ၏အခမ်းအနားဖြစ်သည်	2019-12-20
ယခင်: အလုပ်သင် - အသံထုတ်လုပ်မှု
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လုပ်မှု International